सिन्धुपाल्चोकमा फेला पर्यो अनौठो रुख, काट्दा आउछ रातो रगत !! - Gorkhali Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सिन्धुपाल्चोकमा फेला पर्यो अनौठो रुख, काट्दा आउछ रातो रगत !!
अलिकति पनि हेला नगर्नु होला ! संसारकै सबैभन्दा ठुलो शिव लिङ्ग ! ॐ लेख्नुस मनले चाहेको पुरा हुनेछ !!